Umqeshi: Fumana unxibelelwano lweshishini kuGoogle | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 22, 2014 NgoLwesibini, Julayi 22, 2014 Douglas Karr
Ukuba ujonga unxibelelwano lweshishini kuthungelwano lwentlalo, uGoogle sisixhobo esihle. Ndihlala ndikhangela I-Twitter + igama, okanye I-LinkedIn + igama ukufumana iprofayili. I-LinkedIn, ewe, ine-injini yokukhangela yangaphakathi (ngakumbi ingxelo ehlawulelweyo) kwaye kukho iindawo ezifana nazo Idatha.com ukufumana unxibelelwano. Rhoqo kunokuba kungenjalo, ndisebenzisa uGoogle nangona. Kusimahla kwaye kuchanekile!
Ukugaya uEm yayakhelwe ngokukodwa abaqeshi ukuba bafumane lula abagqatswa kumathuba engqesho kwi-intanethi. Yakhelwe ngokusisiseko ukwakha ngokuzenzekelayo imibuzo yokukhangela ye-boolean yokukhangela ngcono kuGoogle ngolwazi oludingayo. Ikwasisixhobo esihle sabathengisi abazama ukufumana izikhokelo kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni LinkedIn, Google +, GitHub, Xing, Stackoverflow kunye ne-Twitter.
Ujongano lucacile kwaye lulula:
Nje ukuba ufake lonke ulwazi lwakho, umbuzo wokukhangela wakhiwe:
tags: Ukuthengisa kwe-b2bfumana i-b2b ikhokelela kwi-intanethiGitHubukukhangela kwe-githubuphando lweGoogleGoogle +ikhokelela kwi-intanethiLinkedInuphendlo oludibeneyoukukhangela kwi-IntanethiukugaywaukugayaUkuchuma kwamazaukukhangela okugcweleyoTwitterUkukhangela kwi-twitterXingUkukhangela
Ngaba kufuneka ubeke uphawu kwimidiya yakho ekwabelwana ngayo